Oge Paleogene: njirimara, geology, ihu igwe, flora na fauna | Netwọk Mgbasa Ozi
La Oge Cenozoic amalite na Oge Paleogene y bụ nkewa nke geologic timescale. Nke a malitere oge a nke gafere afọ 66 gara aga wee gwụchaa ihe dịka nde 23 afọ gara aga. Oge a mmalite evolushọn nke anụmanụ na-enye anụmanụ dị nnọọ egwu n'agbanyeghị na ha ga-esi n'ụmụ obere pụta. Speciesdị ndị a dị obere ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere dinosaurs dị na Oge Cretaceous.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, geology, ihu igwe, ahịhịa na anụmanụ nke oge Paleogene.
2 Geleji Paleogene
3 Mgbanwe ihu igwe
4 Ifuru na umu anumanu
5 Usoro Paleogene
Aha Paleogene sitere n'ụdị kachasị ochie nke ndụ na-adịbeghị anya. Mgbe anyị na-ezo aka na ndụ ndị na-adịbeghị anya, anyị na-ekwusi ike ihe niile dị adị kemgbe oge Cenozoic. Na mbido nke Paleogene enwere mgbagha na-agwa ya okwu ala ozo mgbe mkpochapu nke dinosaurs na njedebe nke Cretaceous.
N'oge a North America na Greenland kewapụrụ na kọntinent nke Eurasia. N'ihi nke a, e kere Osimiri Norway. Oké osimiri a adịwo ihe dị ka nde afọ 60. N’oge ahụ, Oké Osimiri ndị ọzọ mere njem, dị ka Indian Ocean na Atlantic. N'ihi nke a, ọ gbasaa n'ụzọ nke na ụdị ahịhịa na ahịhịa nwere ike ịgbanwee n'otu n'otu. Nke a bụ n'ihi na a gbanwere ụdị ọ bụla na usoro okike dị iche.
N'ihi ọnọdụ gburugburu ebe obibi a dị iche iche, ụdị a na-emepụta ọtụtụ mgbanwe iji nwee ike ibi na gburugburu ebe obibi.
Ọ bụrụ na anyị anaghị atụ aka na Australia na India, anyị nwere ike ịhụ na ha na-agagharị na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ n'ihi ngagharị nke kọntinent ahụ. Ogologo ije nke kọntinent ndị a dị ihe dị ka sentimita 6 kwa afọ. Dika ihe omumu omumu nke ozo gosiputara, ọnụọgụ nke kọntinent ejirila nwayọọ belata oge.
Ndahie a n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ kpatara ma ọ bụ nkewa nke Antarctica nke dịdebere n'akụkụ osisi ndịda site na mmalite Pangea. Ihe dịka afọ 40 mgbe nke ahụ gasịrị, India adịlarị mbụ kewapụrụ ya n'Africa ma na-aga ịlụso Eshia agha iji jikọta ma mepụta Himalaya. Nkọkọta na nhazi nke Himalayas bụ ihe kpatara imechi ụzọ nke oke osimiri Tethys. Nke a mere ihe dịka afọ 52 gara aga.
N'oge nile nke Paleogene enwere nnukwu mgbanwe ihu igwe dịka ịjụ oyi na mpaghara polar. N'oge ahụ, e guzobere coal na geological owuwu dị ka Alps na mbara ugwu Andean na South America.
Igwe jụrụ oyi a ahụghị ụwa anyị mgbe e kpochapụrụ ya Triassic. N'ihi mbelata nke okpomoku zuru ụwa ọnụ, ekwere ka ọ dị jụụ nke ụwa dum. O sina dị, Ka oge Paleogene na-aga n’ihu, ọnọdụ okpomọkụ nke ụwa mụbara ọzọ. N'ihi mmụba a na okpomọkụ, ụwa malitere ịghọ ebe okpomọkụ n'ọtụtụ ebe. N’ebe ndị a, ihu igwe dị iche na nke ndị ọzọ.
Ngwurugwu kwesiri imeghari ihu igwe. Ha nwere ike ịnọ n'agbanyeghị nbibi ahụ mere n'oge gara aga. Otu n'ime taxa ndị a bụ angiosperms.
Ifuru na umu anumanu
E nwere anụmanụ ndị na-enye nwa ara n’oge ahụ nwere ihe ndị ha na-ahụ taa. N'etiti ha, ịnyịnya, enwe, ụfọdụ ọdịiche nke osisi na ndị ọzọ nke mammals pụtara. Mgbe mkpochapu na njedebe Cretaceous, ọtụtụ ụdị anụmanụ na-eme nke ọma. Anụmanụ ndị a jisiri ike gbasaa, bụrụ ụdị pụrụ iche na mbara ụwa.
Otu umu anumanu kachasi mkpa bu umu anumanu ndi n’etolite oge n’ime ha rue ala ala ha.
E kewara oge Paleogene n'ime oge 3 nwere njirimara dị iche iche nke geology, flora na fauna, na ọnọdụ dị iche iche. Usoro atọ ndị a bụ ndị a: Paleocene, Eocene y Oligocene.
Bụ nke mbụ ogbo nke nde 65 wee dịgide ruo nde 56. N'oge a, ngụkọta ngwakọta nke mpaghara Pangea mere. Efere teknụzụ niile kewara ekewapụrụ na Antarctica na Australia. Obodo nta nke anụmanụ ndị na-enye ara na-adị dị ka nri nri ahịhịa na ụmụ ahụhụ. N’ebe a anyị na-ahụ òké, nnụnụ na anụ na-akpụ akpụ nke ga-adị ndụ n’oge a.
Oge a sitere na nde 56 ruo afọ 34. Ebe a na mpaghara ọdịda anyanwụ dum bụ ịrị elu nke oke ugwu site na nkukpọ nke efere tectonic. Ihu igwe na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ n'oge a. Ihe dị iche na okpomọkụ bụ akara akara, meridian na okporo osisi. Banyere ụmụ anụmanụ, anụmanụ ndị mgbe ochie dịka marsupials na lemurs mere ka ha pụta.
Oge a sitere na nde 34 ruo afọ 23. N'oge a, geology gbadoro anya imechi oghere dị na nsọtụ ọwụwa anyanwụ nke Oke Osimiri Tethys. Ihe a niile mere ka Australia jikọtara Indonesia na efere North America bidoro ikpuchi Oke Osimiri Pasifik. Banyere ihu igwe, a nọgidere na-enwe ọnọdụ ụwa n'ụzọ subtropical na iru mmiri. N'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, omume ahụ gbanwere na friji zuru ụwa ọnụ na mbata nke afọ ice. N'akụkụ nke fauna anyị na-ahụ ndị okwukwe nke gara iwere usoro dị mkpa na mmepe ha. Anụmanụ. Emebere ha ka ha nwee ike ichi ndu obula n’elu uwa. Otu n’ime ihe atụ kachasị mkpa bụ dwarf dwarf na enyí mbụ nke na-enweghị ọdụ. Ọzọkwa, ndị agha ya dị mkpụmkpụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, oge Paleogene jupụtara na mmepe nke osisi na ahịhịa na nke na-atọ ụtọ na ọkwa ala. Na ngwụcha nke Paleogene, mmepe nke primates bidoro, nke ga - emecha bụrụ mmadụ ugbu a. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oge Paleogene.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oge Paleogene
Ihe nru ububa ahụ na-emetụta